Kiiniya waxay lacag joogta ah siisaa Axmed Madoobe: Faarax Macalin - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Kiiniya waxay lacag joogta ah siisaa Axmed Madoobe: Faarax Macalin
Kiiniya waxay lacag joogta ah siisaa Axmed Madoobe. Siyaasiga Faarax Macalin ayaa afka furtey asagoo is weydiiyay sababta argagixiso tiroyar looga adkaan waayay wuxuuna ku tilmaamay shirqool Somaliya waqti hore loo degay.
Faarax Macalin oo sababeeyay arintaan ayaa sheegay in maamulka Axmed Madoobe uu leeyahay askar gaaraysa 7000 kun, sidoo kalana ay 4000 oo ka tirsan ciidanka xooga dalka Somaliyeed ayna u dheertahay ilaa 9000 oo ciidan oo ka socda Kiiniya iyo dalalka kale.
”Waad garan kartaa tirada intaas leeg maka adkaan waayay argagixiso dhan 1500 oo caruur yaryara jawaabtu waa maya ayuu yiri Faarax Macalin.
Ciidamada Kiiniya ee jooga Jubooyinka ayaa kufsi joogta ah ka gaysta goboladaas wuxuuna dalbadey in maxkamd la horkeeno kuwii u dhaqaaqay.
Maaha markii ugu horeysay ee Faarax Macalin ka hadlo in Somaliya u xiran tahay dalalka deriska oo ka hela dhaqaale badan kuna biisha caruurtooda halka askarta Somalidu iyo siyaasiyiintoodu yihin halka laga jabay.